FANAFIHANA TANY TSARATANANA : Maty ilay tovolahy, niakatra fitsarana omaly ny iray amin’ireo dahalo
Maty rehefa nentina notsaboina sy nodidiana tany Antananarivo Andrianoro Andry Michel, 28 taona. Izy ilay tovolahy notifirin’ny dahalo raha handeha hividy volamena tany Tsaratanàna, ny 25 janoary teo. 13 mars 2018
Nitondra vola 30 500 000 Ariary izy tamin’izany ary nisy zandary niara-nanao taingin-droa tamin’ny moto nentiny. Tsiahivina moa fa notifirina avy ao an-damosiny izy ary tao no niditra ny bala rehetra saingy tsy voa kosa ilay zandary nanao taingin-droa taminy. Nandositra avy hatrany moa io zandary io ary tsy hita mihitsy na nanatona ny lehibeny ao Sarobaratra aza ny fianakavian’ilay tovolahy hanontany azy ny zava-nitranga.
Olona teo amin’ny fokontany manodidina moa no namonjy ilay tovolahy, ka nampiantso ny havany sy nitondra azy hotsaboina teto Mahajanga. Mbola nahatsiaro tena tsara izy tamin’izany ary afaka nanambara tamin’ny zandary ny anaran’ireo olona telo tamin’ireo dahalo nanafika azy. Fantany ireo olona ireo fa mifanena aminy matetika eny an-tsena. Taorian’ny fikarohana nataon’ny zandary kosa dia efa tratran’ny zandary tao Andranomamy i Fenosoa, iray tamin’ireo notononiny anarana. Nentina natao fanadihadiana eto Mahajanga ary natolotra ny Fitsarana, omaly alatsinainy.
Tonga eto Mahajanga koa ilay zandary niaraka tamin’ilay tovolahy rehefa nampiantsoin’ny lehibeny teto ary efa natao fanadihadiana. Tsy nisy nipika tamin’ny fianakaviana kosa izay nambarany, ka nahatonga ny fianakaviana miahiahy azy io. Nandositra ity zandary izay nitondra basy tamin’ny fotoana nanafihana sy nitifirana an’i Andry. Tsy hita popoka mihitsy izy nandritry ny fotoana maro na dia notadiavina aza nefa dia mpifanerasera izy ireo amin’ny andavanandro. Fantatra kosa fa mbola tadiavina ireo dahalo roa hafa voatonona anarana.